Mayelana NATHI - Shanghai H & H Hotmelt Adhesives Co., Ltd.
Iphrofayili yenkampani ye-H & H
I-Jiangsu Hehe New Materials Co., Ltd I-Shanghai Branch iyinhlangano esungulwe eShanghai njengendlunkulu yezokumaketha ye-Hehe New Materials, enikezelwe ekuthuthukiseni nasekulondolozeni inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke yemikhiqizo ye-Hehe. Uphawu lwe- "Hehe Hot Melt Adhesive" selwakhiwe ngokucophelela futhi lwagcinwa yithimba iminyaka engaphezu kweyishumi futhi seluphenduke uphawu lokunamathisela olushisayo olunedumela eliphakeme nokuthandwa embonini. Seyakhe isisekelo sokukhiqiza nokucubungula esingaphezu kwamamitha-skwele ayi-10,000 e-Jiangsu Qidong Binhai Industrial Park nase-Hehe; inamagatsha noma izinkampani eziphethe eWenzhou, Hangzhou, Fujian naseGuangdong ukuhlinzeka ukwesekwa kwezicelo zokubambelela ezishisayo zamakhasimende ngokushesha okukhulu. Njengebhizinisi lobuchwepheshe elihlanganisa i-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa, nangokuhlanganisa izinsizakusebenza ze-R & D zomhlaba emkhakheni wezinamathelisi ezishisayo, u-Hehe uhambisana nomkhuba wakamuva wokuthuthuka wokusebenzisa okuncibilikayo okushisayo emikhakheni ehlukahlukene futhi kwakha okunamathiselwe okuncibilikisayo okuhlukile nokuhlukile Ucwaningo lwesicelo se-membrane kanye nesikhulumi sokuthuthuka selwenze uhlelo "lokuhola lwasekhaya, oluhambisanayo emhlabeni wonke" oluhlanganisa ukukhiqizwa, ukufunda nokucwaninga, futhi lube phambili emakethe ekusetshenzisweni nasekukhulisweni kwamafilimu wokunamathisela ashisayo.
Amandla we-H & H
Imikhiqizo yethu yefilimu yokuncibilika eshisayo inesikhundla semakethe esihamba phambili emkhakheni wezicathulo ezintweni ezishisayo zokuhlanganisa i-glue, izinto zikagesi, ukukhiqizwa komfaniswano wezempi, izinto zokuhlobisa, izingubo zangaphansi ezingamaki nezinye izinkambu, kusebenza inani elikhulu lezinto zasekhaya nezangaphandle ezaziwayo brand kanye nemikhiqizo ehlukahlukene Ingathatha indawo yemikhiqizo efanayo engenisiwe. Kwenziwe intuthuko enkulu ekwakhiweni nasekusebenzisweni kokufaka izinto ezinamathelayo zendabuko ezingezona ezemvelo, ezizokwenza ngcono kakhulu umthelela wezinto ezahlukahlukene ezihlanganayo empilweni yabantu nasemvelweni yezemvelo.
Esikuthengisayo akuyona nje kuphela imikhiqizo, kodwa ukudala inani elengeziwe nezinsizakalo zamakhasimende nomphakathi.
H & H udumo
Le nkampani isidlulile isitifiketi sokuphathwa kwekhwalithi ye-SGS ISO9001, futhi imikhiqizo isidlulile isitifiketi sokuvikelwa kwemvelo. Hehe abantu bebelokhu benamathele kwifilosofi yebhizinisi "ikhasimende kuqala, njengokuhamba eqhweni elincanyana", ngenhloso yokuthuthukisa"ukusebenzisa nokuthuthukisa ubuchwepheshe obushisayo ukwenza impilo ibe nempilo engcono", ukwenza izinto ezintsha njalo nokukhula, izidingo eziqinile zekhwalithi nokulawulwa, kuzokwenza hehe Umkhiqizo uyaqhubeka nokusebenza kanzima ukuze ube ngumkhiqizo wokunamathela oshisayo owaziwayo omhlaba jikelele.